ODEEFFANNOON FINFINNEE IRRAA DHUFTE AKKAS JETTI! - Kichuu
HomeNewsAfricaODEEFFANNOON FINFINNEE IRRAA DHUFTE AKKAS JETTI!
#ODEEFFANNOON FINFINNEE IRRAA DHUFTE AKKAS JETTI!
Diyaaspooraan Oromoo biyya alaa jiraattu walgahii Bilxiginnaan guyyaa har’aa Finfinneetti waame irraa hafuun mormii isaanii dhageesisan. Walgahiin kun Gidduu gala Aadaa Oromootti kan waamamee yoo tahu Oromoota biyya alaa jiraatan 400tu Irratti hirmaata jedhamee ture.
Garuu kan walgahii kanarratti kanneen hirmaatan namoota 15 hin caalan jedha maddi keenya. Namoonni dhufan garri caalu paartii PP keessa kan jiranii fi Waltajjiichis gara marii PPtti geeddaramee akka ture maddi keenya dabalee ibsee jira.
Marii kanarrattis kanneen diyaaspooraa ta’uun hirmaatan Leencoo Baatii fi Dammaqaa Nagaasaafi kkf akka ta’e mirkaneeffannee jira.
Guyyaa ar’aa Gootoni Omoota Arsii Lixaa Hidhamtoota Oromoo Mana Hidhaa ajjeetti Hirarfamaa jiran Mana Hidhaa Cabsanii baafataniiti jiran. Gochi akkasii waan Oromoo Guutuu Gammachiisuudha!.
Ilmaan Oromoo Mana Hidhaa Harar keeysa jiru, Dirree Dhawaa, Ciro, Qeellam Wallaggaa, Dodolaa, Amboo, Gindhiir, Asan-Daabboo, Sabbataa, Qallittii fii Guutuu Oromiyaatti Hidhamanii Dararamaa jiran Mootummaa Ummataatiin ni Hiikamu!. Mootummaan Kan Ummataati Malee kan Biltsiginnaatii miti!.
Qeerroo Bilisummaa Oromoo Godina Jimmaa Fi Naannoo Isaa Maraaf.
Waamicha Waraana Bilisummaa Oromoo (WBO) Zoonii Jimmaa Cibiraa Shanan Gibee Irraa. Waraanni bilisummaa Oromoo WBOn Zoonii Jimmaa Cibiraa Shanan Gibee qabsoo hidhannoo geggeessaa jiru wareegama qaamaa qalbii baasaa kan jiru jijjiirama kabeebsaa qabsoo karaa nagaa baanamuun haqni Ummattoota biyya keenyaa addatti immoo rakkoo hammaataa Ummattootaa fi Qeerroon Bilisummaa Oromoorra gahaa jirutti furmaata waaraa gochuuf akka tahe beekamaadha.
Sarbamiinsa mirga namoomaa Ummata Oromoo fi lammiilee Oromiyaa irratt abbootii irree maqaa jijjiiramaatiin aangoo isaanii itti fufsiisuuf carraaqaa jiraniin raawwatamaa jirutti xumura gochuun dirqama haala yerooti. Haaluma kanaan Qeerroon Bilisummaa Oromoo sadaasa 17_2020 labsii Fincila Xumura Garbummaa (FXG) guutummaa Oromiyaatti labseen wal qabatee Qeerroon Bilisummaa Oromoo Godina Jimmaa gahee isin irraa eegamu lammiilee Oromiyaa godina Jimmaa keessa jiran waliin qooda keessan akka bahattan WBOn Zoonii Jimmaa Cibiraan Shanan Gibee waamicha isiniif godha.
Qeerroon Bilisummaa Oromoo qabsoo karaa nagaa geggeessuun kan beekamu tahuu osoo beeknuu haalli yeroo ammaa biyya keenya muudatee jiruun wal qabatee qaamoleen lamaan kaleessa Ummatni Oromoo akka mirga isaa hin falmanneef waliin hacuucanii sakaalaa turan har’as darabee wal jijjiiranii garbummaa jala nu tursuuf dorgommiirra waan jiraniif Oromiyaatti kabaja waaraa fiduuf dirqama waloo bahachuu waan qabnuuf isin faana jiraachuu keenya isinii ibsuu barbaadna. Oromiyaan waggoota 27n darbaniif qaama bakka ishee bu’uu dhabdee osoo of hin ijaarin waan turteef baroota jijjiirama jedhu keessattis ammallee qaama wabii nageenyaa taheetii jiru WBO fi Qeerroon Bilisummaa Oromoo jabaannee caasaalee bulchiisa godina keenyaa dhuunfannee lammiilee Oromiyaa barootaaf wal dandeenyee waliin jiraanne ammas nagaa fi tasgabbii waloo keenyaa akka dhugoomsinu waamicha isiniif gochuu feena.
Akkuma argaa jirruufii argaa jirtaan yeroon amma keessa jirru kun yeroo murteesoofi carraa dhumaa akka ta’e isin hubachiisuu barbaanna. Dabalatan dhalattoota Godina kanaa kan biyyoota alaafi biyyoota ollaa jirtaniif qoonni isin qabsoo bilisummaa oromoof gootaan kan duraanii caalatti akka jabaataniifi Akkuma oromoota kutaalee oromiyaa biroo beekumsaaf qabeenyaa keessan qabsoo bilisummaa oromoo (WBON)durfamun akka utubdan waamicha isiniif goona. seenaa keessatti Godinni kun qooda bahinsi inni qabsoo bilisummaa oromoof qabu gadaana ta’us gootonni hedduun keessatti wareegamaa turanii ammas wareegamaa jiru kanaaf obboloota keenya biyyoota ollaaf biyyoota alaa jirtaan yeroon isin muddii keessan jabeeffattanii qabsoo Bilisummaa oromoo tumsiitaan amma ta’u isin hubachiisuu barbaanna. Waamichi .Waraanni Bilisummaa Oromoo WBOn Zoonii Jimmaa Cibiraan Shanan Gibee Qeerroo Bilisummaa oromoof
WBO Godina jimmaa cibiraa shanan gibee irraa!